Igbo, Romans, Lesson 016 -- He who Judges Others Condemns Himself (Romans 2:1-11) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 016 (He who Judges Others Condemns Himself)
NDI ROM 2:3-5
3 Ma i chere nke a, nwoke, gị onye na-ekpe ndị na-eme ụdị ihe ndị a ikpe ma na-eme otu ihe ahụ, na ị ga-agbanahụ ikpe nke Chineke? 4 Ka ị na-eleda ịdị ukwuu nke ịdị mma ya, ndidi ya na ogologo ntachi obi gị, n'amaghị na ịdị mma nke Chineke na-eduga gị na nchegharị? 5 Ma dika obi-ume-gi nile na obi-gi nke n impchèghi iwe si di, i n uputa onwe-gi iwe nke nrubiga-ókè nke iwe na nkpughe nke ikpé ziri ezi nke Chineke.
Ndi ị maara na ihe arụ kachasị arụ bụ ịkwa iko ma ọ bụ nganga, ma ọ bụ ịkpọ Chineke asị, kama ọ bụ ihu abụọ? Onye ihu abụọ na-eme dị ka onye ezi omume, onye kwụ ọtọ, na onye na-asọpụrụ Chineke, ebe ime ya jupụta n'ụdị ụgha, adịghị ọcha na aghụghọ. Ọ bụ ihe arụ n'anya Jehova. Onye Nsọ ga-ewepụ ihe mkpuchi gị n’ihu gị, kpughee n’ihu mmadụ niile, ndị mmụọ ozi na ndị nsọ eziokwu nke mmehie gị, n’ihi na i mere ka ị dị nsọ n’ihu ha. Ajọ gị karịrị gị ịma. Emela ihe ọ bụla nke na-agha ụgha. Dika anabataghi ndi njem n’ime ugbo elu ma oburu na ha mere nlebara anya nke oma, ya mere odighi onye obula bara rue mgbe ebighebi ma oburu na akpoputara ya ikpé ziri ezi nke odighi onye puru ipu. Gini mere otutu mmadu ji atu egwu oge onwu ha, ma ghara ima jijiji site na mbata nke onye na eme ha ihe ojoo? N'ihi na n'oge ndị a, ndị mmadụ na-amata ozugbo na ihe ahụrụ ndụ ha, na ha na-eguzo n'ihu oge ikpe.
N'ụbọchị ikpe ikpe ahụ, ndị niile nke ụwa; oji, odo, acha ọbara ọbara, aja aja na ọcha, gụnyere ndị ọgaranya na ndị ogbenye, ndị dị ala na ndị dị ala, ndị amamihe na ndị nzuzu, okenye na ụmụ agbọghọ, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, nkekọ na nnwere onwe ga-ezute n’ihu Chineke. Mgbe ahụ, a ga-emeghe akwụkwọ ndị nwere ihe ndekọ, omume, na echiche ndị mmadụ. O sighi ike nye anyi, bu onye noo n’agba ogu nke ndi nlere, igwe onyonyo, na eserese pere mpe, ka anyi ghota na odi nfe Onye kere anyi idekọ ihe nile o kere eke. Onweghi oge ma obu osochi na mgbe ebighi ebi, Chineke ga-enwe oge zuru ezu iji kpachara anya nyochaa okwu gi. Kwesighi ikwuputa okwu ọ bụla iji gbachitere onwe gị n'ihu Onye na-enyocha obi na uche, ọ baghịkwa uru ịgbachi ndị ọzọ ebubo, ma ọ bụ ịta ndị mụrụ gị, ndị nkuzi gị, ma ọ bụ ndị ọzọ ebubo. Ibu onye ikpe, ma Chineke mara gi ikpe. Yabụ, jikere guzoro n’iru Onyeikpe ukwu, n’ihi na ịgaghị agbanahụ oge ikpe ya.
Mara taa, na mkpughe nke ebube Chineke, na-emetọ gị. Ebidola ịtamulata uju na iru uju, kama kwuputara mmehie gị n’ihu Chineke, gọnarị ma maa onwe gị ikpe ma kwuo ihe i mere. Ezochila ihe ọjọ ojoo gi obula, kama kwuputanu n’ihu Onye Nsọ na o buru ihe ojoo n’uche gi nile. Nmebi nke mmụọ nke onwe gị bụ naanị ụzọ maka nzọpụta gị. Ọ dikariri kamel nfé n’anya agịga, kari onye-nganga ba n’ala-eze Chineke.
Kaosinadị, Chineke nwere obi ebere. Ọ naghị ebibikwa ihe ndị o kere eke n’ụzọ enweghị obi ebere, kama ọ hụrụ ndị mmehie chegharịrị echegharị bụ ndị kpebisiri ike ịhapụ mmehie kpamkpam. Chineke matara na mmad niile ad aregh are emebi, maod nonegh is onye ezi omume n'iru tupu idi honso ya, kama onaenwe ndidi, juputara na andhụnanya na ebere; n'ihi ebere-ya, O meghi ka onye-nmehie laghachi na ntabi anya. Ikpe ziri ezi ya chọrọ ikpe mmadụ ọ bụla ikpe na ọnwụnwa taa, mana ịdị mma ya na-enye anyị ohere ọzọ ichegharị. Anyị niile dị ndụ site na mgbapụta nke Chineke. Obi abụọ adịghị ya, o nwere ikike na ikike iji otu ọrịa bibie ụwa anyị, ma Chineke, Onye na-echebe ma na-emere anyị ebere, anaghị eme ngwa ngwa, kama na-atụ anya na mmadụ niile ga-atụgharị gbanwee obi ha. Icheghariri n’ebe Chineke nọ n’akwa ụta ma rịọ ya ka o kee obi dị ọcha, meekwa ka mmụọ dị mma dị ọhụrụ n’ime gị? I jiri obi ebere nke Chineke mezue ọrụ nke mmehie gị n'okpuru uwe mwụda nke ezi omume? You na-eleda ịhụnanya nke Chineke anya site na ichigharịkwuru ozizi ụgha na nkà ihe ọmụma, na-achọ ịgbanarị echiche nke ikpe? Ikpe nke ubochi ahu buru ihe an’ihi na onye n’adighi onwe ya ma nwukwa n’azu ochicho obi ya na eleda onye na - ele obi na uche, onye n’adighi ụra ma obu ura, kama onye matara udi omume nile nke nwoke.
Jidesie ike na obiọma Chineke, a ga-azọpụta gị. Banye n'ime obi ebere ya, ị ga-enwe olile anya. Gbanwee obi gi, ma mata ihunanya nke Chukwu mara onye Chukwu bu. Ọ bụ nna nwere obi ebere, ọ bụghịkwa onye ọchịchị aka ike na-enweghị atụ nke na-eme ihe masịrị ya n’ebughi onye ọ bụla lekọta ya. Chineke na-ahụ, na-anụ ma mara ihe niile gbasara gị. Ọ maara ndị nna nna gị, yana nzụlite gị, yana gburugburu na ọnọdụ niile metụtara agwa gị. Ọ makwa ọnwụnwa gị na uche gị nke aghụghọ. Chineke abụghị onye ajọ omume. Ọ dị mma, na-achọ ikpe ikpe na imere ebere. Ọ dị njikere ịgbaghara gị, ma dịkwa njikere sachapụ gị ma ọ bụrụ na i nyefere ya onwe gị kpamkpam, kpọọ arụ gị asị, kwupụta mmejọ gị, ma kpebisie ike ịhapụ ya n'aha ya.
Ahụhụ ga-adịrị gị mgbe ịmara ịdị-nsọ na obi-ọma nke Chineke ma unu echegharịghị! N'ihi na mb thene ahu obi-gi di arọ́, ọ bu kwa uche-gi kpuru ìsì. Onye ihu abụọ dị isi ike merụrụ arụ na mmụọ ya, ọ gaghị atụgharị. Onweghi ike ịnụ, ma ọ bụ ghọta n'ụzọ dị mfe ọkpụkpọ nke Chineke ọzọ. Ọ na-agụ okwu Chineke n’enweghị nsogbu ọ bụla. Yabụ, chegharịa oge ọ bụla akpọrọ “Taa”, ma tinye nnukwu mgbalị iji chekwaa nzọpụta gị tupu enwee ohere ọzọ ịme ya.
N'oge awa ahụ dị egwu, a ga-ewesa iwe Chineke iwe megide ndị nụrụ banyere obiọma ya ma leghaara ya anya, ma ghara iji obi mgbawa chigharịkwute ya. Ndị ahụ ga-enweghị nchekwube n’ụbọchị ikpe, n’ihi na ha mebiri isi obodo ime mmụọ ha, ma wetaara Chineke ihe ọ bụla belụsọ ikpe ọmụma, ịkpọasị, ịkpọasị, mmejọ, na ikpe na-ezighị ezi. Ekwesịrị ka ekpughee ndị ahụ, taa ha ụta, ma maa ha ekpughere ya, ita ya ụta, ma maa ya ikpe, n'ihi na ha echegharịghị ma ọ bụ kwupụta mmehie ha.
EKPERE: O Onye nweayi, mee ka m nwee ncheghari na ntuzi nke Mo Nso gi. Kpọghachitere m gị, n'ihi na nlọghachi m ezughị. Nyere m aka ka m ghara ileghara ịdị nsọ gị na ịhụnanya gị, mana mara na ndidi gị enweghị ndidi. Jehova, emebiwo m iwe gị. Ejila ọnụma gị maa m ikpe, kama jiri ọmịiko m nara m. Gbaji ụdị mpako niile n'ime m ka m wee nwụọ onwe m wee biri site n'obiọma gị. Dọputam na omume nile nke iru-abua, Ekwe-kwa-la ka obim jọọ gi njọ. Are bụ Onyeikpe m na Onye Nzọpụta m. Ọ bụ gị ka m tụkwasịrị obi.
Gini ndi b ihe nzuzo nke Pol kpughere anyi banyere ikpé nke Chineke?
Page last modified on January 25, 2021, at 03:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)